टर्की (फोटो गैलरी) मा renault Twizy | RayHaber
घररेलटर्की मा renault Twizy (फोटो गैलरी)
09 / 06 / 2014 रेल, साधारण, राजमार्ग, HEADLINE
टर्की मा renault Twizy: renault Twizy, असाधारण डिजाइन र शून्य एक बिजुली quadricycle environmentalists%2/ 100 wheeled वाहन जारी coxnumx।
Twizy ले यसको आरामदायक, रमाईलो, बोल्ड र नवीन दुई-सीटर डिजाइनको साथ आफ्नै खण्ड सिर्जना गर्दछ।
Twizy, महानगर यातायात को समस्या को सबै भन्दा उपयुक्त समाधान! अल्ट्राकम्प्याक्ट ट्विजी एउटा सानो स्थानमा पनि पार्क गर्न सकिन्छ।
सुरक्षा चालकको अगाडि एयरब्याग र चार-पोइन्ट फ्रन्ट सीट बेल्ट र पछाडि यात्रीको लागि तीन-पोइन्ट रियर सीट बेल्टको साथ ट्विजिलाई सुरक्षा दिइन्छ।
रेनोल्ट ट्विजीको अनौंठो डिजाइनको साथसाथै, एउटा अद्वितीय ट्विजी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
Twizy एक उत्कृष्ट UDO (अज्ञात ड्राइभिंग वस्तु) रेनो स्पोर्ट टेक्नोलोजीद्वारा विकसित गरिएको हो। ट्विजीसँग गुल-वि wing्ग ढोकाको साथ आकर्षक डिजाईन छ र यसको दुई ठूला सुविधाहरूबाट नाम राखिएको छ: प्रयोग गर्न सजिलो र दुईको लागि अल्ट्रामोबाइल।
Twizy एकल इन्जिन र एकल उपकरण स्तरको साथ उपलब्ध छ: 17bg, अधिकतम गति 80km / s ट्वीजीको "जीवन" को एक मात्र संस्करण
रेनॉल्ट ट्विजिको 100km दायरा छ। Twizy3१/२ घण्टा भन्दा कममा पूर्ण गर्न सकिन्छ। 6.1kw / s लिथियम-आयन ब्याट्री कुनै पनि 220V पावर आउटलेटबाट चार्ज गर्न सकिन्छ।
Twizy, टर्की जुन 26 2014 देखि बेच्न हुनेछ। रेनॉल्ट ट्विजी ब्याट्री 13.700 ब्याट्रीको साथ संयोजनको रूपमा बेचिन्छ।
रेनोको ब्राण्ड नयाँ डिजाईन ट्विसी व्लालाडोलिड, स्पेनमा उत्पादन भएको छ।
Twizy: 100% मनोरन्जन, तपाइँलाई 100% अनन्य
ट्वीजी एक 100 इलेक्ट्रिक वाहन छ जुन टुप्पोदेखि अर्को सम्मको शहरी यातायातको लक्ष्यको साथ डिजाइन गरिएको छ, र ट्वीजी बजारमा अद्वितीय छ। ट्विजी, पहिलो 2009 फ्रान्कफर्ट मोटर शो मा एक avant-garde अवधारणा को रूप मा प्रस्तुत, जुन को मध्य रेनोमा शोरूमहरु मा देखा पर्नेछ। दुबै पुरुष र महिला ग्राहकहरू, युवा व्यक्तिहरू र पेशेवरहरू लक्षित गर्दै, ट्भिजीसँग विशेष लक्षित श्रोताहरू छैनन् - ट्विजि न केवल असामान्य हो, तर वास्तविक, आर्थिक र वातावरणमैत्री मनोरन्जनको खोजीमा रहेका कसैलाई पनि हो!
एउटा अद्वितीय यातायात अवधारणा जुन कार प्रस्ताव भन्दा छिटो छ ...
यो शान्त हुन र धेरै राम्रो गर्न सम्भव छ! Twizy शहर को बासिन्दा को लागी एक नया, अद्वितीय शहरी यातायात समाधान प्रदान गर्दछ। अल्ट्रा-कम्प्याक्ट (लम्बाई = 2.34m / चौडाई = 1.24m) ट्विज पनि सानो खाली स्थानमा फिट हुन सक्छ र सानो ठाउँमा पार्क गर्न सक्दछ। शून्य देखि 45km / घण्टा (50cc स्कूटरको प्रदर्शनको बराबर 125 मिटरको दूरीमा) यसले केवल छ सेकेन्ड लिन्छ: ट्विसी एक अविश्वसनीय प्रभावशाली फोर-व्हीलर हो! साधारण शहरी यात्रामा - पार्कि including सहित - यसले ड्राइभर% 25 समय बचत गर्दछ र ईन्धनको थोपा खेर फाल्दैन। यसको Panoramic दृश्य, स्लिम विंडस्क्रीन खम्बाहरू, खुला वास्तुकला र 3.4 मिटर मोड मोड त्रिज्याको साथ, यातायात चपलता जीवनशैलीमा परिणत हुन्छ।
Twizy दुई वा तीन-व्हीलर भन्दा सुरक्षित छ
ट्वीजीले गाडी सुरक्षामा रेनोको उत्कृष्ट विशेषज्ञताको फाइदा लिन्छन्। यसको अनौंठो उपस्थिति र वातावरणीयताका अतिरिक्त, ट्भिजीले पारंपरिक कारको सुरक्षा र आराम सुविधाहरूको दुई-पा wheel्ग्रे फुर्तीको साथ जोड्दछ। सबैभन्दा पहिले, चार व्हीलहरू निश्चित रूपमा दुई वा तीन पा whe्ग्रा भन्दा धेरै सन्तुलित छन्। ट्विजीले डिस्क ब्रेक र रेनोल्ट स्पोर्ट टेक्नोलोजीहरूको विशेष विकास इनपुटहरूका लागि सडकलाई पनि अपनाइरहेको छ। ट्विसीले असाधारण अनुपातमा दुई सीटहरूको वरपर पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र प्रदान गर्दछ। ट्विजीसँग ड्राइभरको अगाडि एयरब्याग र चार-पोइन्ट फ्रन्ट सीट बेल्ट र पछाडि यात्रीका लागि तीन-पोइन्ट रियर सीट बेल्ट छ। ट्विजीको ढोकाले बाह्य प्रभाव र एयरफ्लो दुबै विरूद्ध थप सुरक्षा प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, अगाडि प्यानलमा दुई ग्लोभबक्सहरू (3.5 र5लिटर, पछिबाट लक गर्न सकिन्छ) एक 12V पावर सप्लाईले सुसज्जित छन् र यात्री सीटको पछाडि 31 लिटरको सामान डिब्बे पनि छ।
Twizy प्रयोगकर्ताहरु को लागी स्वतन्त्रता छ वाहन भित्र र बाहिर आफ्नो निजीकरण सुविधा छनौट गर्न। छत र ढोकाबाट एल्युमिनियम रिमसम्म र ग्लोभ कम्पार्टमेन्ट कभर र सीट अपहोल्स्ट्रीमा पनि, रंगको विस्तृत श्रृंखला प्रयोगकर्ताको इच्छा अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ। ट्विजी एक उत्कृष्ट र अनौठो मोडल हो जुन गल-वि wing्ग गेटहरू र आकर्षक शहरी लुकको साथ छ, कोही पनि यसलाई आफ्नो आँखा लिन असक्षम हुनेछन् ...
एकल ईन्जिन, एकल उपकरण स्तर ...
Twizy सँग एक इन्जिन विकल्प छ:
Twizy इन्जिन 13kW (17bg) द्वारा संचालित छ। अधिकतम टोक़ 57Nm हो र अधिकतम गति 80km / h हो।
Twizy ले उपकरण स्तरको एक एकल संस्करण पनि प्रदान गर्दछ: "Life" संस्करण। अनुकूलन विकल्पहरू, 13 एल्युमिनियम पाels्हरू (बिभिन्न रंगहरूमा), ब्लुटुथ संगीत प्रणाली र धातु पेंट विकल्पहरूको रूपमा उपलब्ध छन्।
चार्ज र दायरा
गाडीको 100 किमी शहर दायरा छ। 6.1kW / h लिथियम-आयन ब्याट्री र ब्रेक / गिरावटको बखत ऊर्जा पुन: प्राप्ति प्रणालीलाई धन्यवाद, Twizy प्रयोगकर्ताले दैनिक जीवनमा आर्थिक ड्राइभिंग सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राख्दै औसत 80 किलोमिटर दायरामा पुग्न सक्दछ। (दायरा सडक सर्तहरू, ड्राइभिंग शैली र गति कारकहरूमा निर्भर रहन सक्दछ।) 55km दायरा सब भन्दा गाह्रो सडक अवस्थाहरूमा पनि सम्भव छ।
Twizy3१/२ घण्टा भन्दा कममा पूर्ण गर्न सकिन्छ। ट्विजीको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये यो यो कुनै पनि 220V इलेक्ट्रिकल आउटलेटबाट चार्ज गर्न सकिन्छ। Twizy एक एकीकृत तीन मिटर लामो बैटरी चार्जिंग केबलको साथ बेचिन्छ जुन 220V होम आउटलेटसँग उपयुक्त छ।
Twizy सबै आवश्यकता र चाहना लाई अनुकूलन गर्दछ
ट्विजमा संगीत सुन्न पनि सम्भव छ। दुई वक्ताको साथ पोर्टेबल उपकरणहरूको लागि वैकल्पिक ध्वनि प्रणाली; यसले ब्लुटुथ वा USB मार्फत संगीत सुन्न अनुमति दिन्छ। जिप्पर्ड डोर विन्डोजहरू, जुन सामानको रूपमा बेचिन्छ, वर्षा र बतास मौसममा अत्यधिक कार्य गर्दछ। ट्वी ट्विजी सही प्रमाण हो कि यो एकै समयमा दुवै सरल र स्टाइलिश हुन सक्छ।
रेनो खेल खेल टेक्नोलोजीको पछिल्लो सिर्जना
ट्विज रेनोको मोटरस्पोर्ट विभागमा गठन गरिएको थियो। ट्विसीको विकासलाई विशेषज्ञ हातमा हस्तान्तरण गरिएको छ, चेसिस र रेनॉल्ट स्पोर्ट टेक्नोलोजीद्वारा रेखाचित्र प्रदर्शन सुविधाहरूको प्रारम्भिक जानकारीबाट इन्जिन र विश्वसनीयता बीचको सद्भावलाई एफएक्सएनयूएमएक्स ईन्जिनको रूपमा उही डायनामाको साथ चलिरहेको। अवधारणाको सुरुदेखि नै, मिसन दुबै एक सजिलै प्रयोग गर्न (EASY) र दुई व्यक्तिको अल्ट्रामोबाइल (TWIN) सिर्जना गर्ने थियो।
यसको अन्य शक्तिहरूको साथसाथै, यस परिष्कृत टेक्नोलोजीको नयाँ उत्पादले सक्रिय र निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालीहरू समावेश गर्दछ जुन रेनोको विरासत योग्य छ। यसको कम तौल ब्याट्री संग, Twizy एक अद्वितीय अनौंठो अवधारणा प्रदान गर्दछ आश्चर्यजनक तेज इलेक्ट्रिक मोटर (13kW, 57Nm) को गति को लागी धन्यवाद।
रेनो-निसान-मित्सुबिशी, वार्षिक सिनर्जीहरू मध्ये एक ...
ओयाक रेनल्टले वर्षको मोटर वाहन कम्पनी बन्यो
रेनो समूह, फियाट-क्रिसलर अटोमोबाइलहरू ...
2019 मोडेल टी सीरीज संग मार्सिन मा रेनल्ट ट्रक
नयाँ रेनल्ट क्लियो द बेस्टको क्लोियो
ओयाक रेनाल्ट गोर टेक्नोलोजी युवा युवाहरू
MAIS संपर्क केन्द्र विश्वमा रेनल्टले4अवार्ड प्राप्त गर्दछ
रेफ्रिजरेटेड परिवहन मा रेनल्ट ट्रक अंतर
7 को बारे मा Renault Sales Down!
अगस्तको लागि रेनो अभियान
Alanya Teleferik को पहिलो यात्री राष्ट्रपति Yücel थियो ...
मेट्रो 16 वर्धापन दिन Yıl मा प्यान्ट्स-मुक्त यात्रा
Erciyes मा टर्की मा पहिलो पटक, हिम भलिबल प्रतियोगिता